Data nchịkọta site na Nsonaazụ Google - Ọkachamara Shiol
Ọtụtụ webmasters, mmemme, na ndị mmepe na-enyocha Google iji nweta ozi bara uru. Ha na-ewepụta ibe weebụ chọrọ na data mbupu na CSV na JSON. Ejirila ngwá ọrụ na-ekpuchi n'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ma ndị a ma ama bụ ndị a kpọtụrụ aha n'okpuru.
1 - kosten für umzug vermieter. Bubata. :
Ọ bụ ọrụ bara uru iji kpochapụ ọtụtụ puku njikọ njikọ Google n'ime nanị minit iri. Na Bubata. Ee, ị nwere ike ịmepụta datasets gị na data mbupu na CSV na JSON faịlụ. Ngwaọrụ a adịghị mkpa ka ị dee koodu ọ bụla ma nwee 1000+ API iji rụọ ọrụ ya. A maara ya nke ọma maka igwemịzụ ya na-achọpụta na nkà na ụzụ na fetches data dịka ọchịchọ gị si dị. Ngwa ngwa a dị ugbu a maka Mac os X, Windows na Linux ọrụ. Bubata. ọ bụghị naanị ihe ntanetị weebụ kamakwa onye na-ewepụta data na onye na-agba ụra.
2. Webhose. na:
Site na Webhose. Ee, ị nwere ike ịnweta data oge-eme ozugbo ma rafuo ọtụtụ puku njikọ Google na ihe nkeji. A na-akwanyere ihe nchọgharị weebụ maka igwemịzụ ya na-achọpụta nkà na ụzụ ma nwee ike ịgbanwe data gị n'ime ihe karịrị asụsụ 120. Ọzọkwa, ọ na-azọpụta nsonaazụ ndị dị ka JSON, RSS na XML. , Onye mmemme na ndị ọchụnta ego na-eji Webhose. ị ga-ehichapụ akwụkwọ akụkọ ozi dị iche iche na njem ụzọ njem ma budata data kpọmkwem na draịvụ ike ha.
CloudScrape, nke a makwaara dị ka Dexi. Ee, bụ ọrụ zuru ezu na-eji Google wepụ na nkeji ole na ole. Ọ dị mma maka ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na ebe nrụọrụ weebụ siri ike. Ndị Spammers jiri ọrụ a wepụta ọdịnaya weebụ dị iche iche. Ọ na-enye nchịkọta akụkọ na-eme nchọgharị ma na-eji bọtịnụ iji rawaa ibe weebụ gị ma wepụ ozi na oge. Ị nwere ike ịchekwa data amịpụtara na Google Drive ma ọ bụ Igbe. ụgbụ ma ọ bụ wepụ ya dị ka JSON na CSV.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ilekọta 1,000 njikọ Google na ise na nkeji iri, Scrapinghub bụ ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị maka gị. Ọ bụ onye na-ewepụta data sitere na ígwé ojii na usoro mmemme nke ọdịnaya tinyere ọtụtụ nhazi na njirimara. Scrapinghub na-ejikarị ndị na-eme ihe nledo eme ihe iji webata ọdịnaya weebụ bara uru ma nwee proxy rotator iji mee ka ọrụ gị rụọ ọrụ.
5. Anya na-ese foto:
Site na Nkiri Anya, ị nwere ike ịchọta ma chịkọta ihe karịrị puku abụọ Google njikọ na ihe nke sekọnd.Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị ịtụnanya na ndị a ma ama nchịkọta weebụ na usoro mmepụta data. Enwere ike ịpụpụ data iji bido dị ka SQL, JSON, XML, na CSV. Ị nwere ike ịnakọta, nyochaa ma wepụ ọdịnaya weebụ na ntanetị ntanetị dị mfe. Iji hụ na ndị ọrụ ya 'chebe ya, Google emejuputala ọtụtụ atụmatụ ma rịọ gị itinye fancha na mgbe niile. Ọ pụtara na ọ bụrụ na ị zigaa arịrịọ iri abụọ maka engines na-achọ, a ga-ajụ ụfọdụ n'ime ha ozugbo ma ọ bụrụ na ejideghị captcha.Ebumnuche Google iji gbochie ndị ọrụ iji kpochapụ njikọ njikọ ọchụchọ ya, ma a na-eji ngwá ọrụ ndị dị n'elu wepụ data sitere na weebụsaịtị na blọọgụ.